धनकुटामा चार दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा - समाचार - साप्ताहिक
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत भैसकेको भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले सबल धनकुटा नगरको नेतृत्व प्राप्त गर्ने होडबाजीमा यहाँ विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । चार दशकभन्दा पहिले नै नगर घोषणा भएको धनकुटा नगरपालिकाका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारले आ–आफ्नो पक्ष बलियो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि चुनावी वातावरण तथा उम्मेदवारको व्यक्तित्वका आधारमा कसले बाजी मार्ला भन्ने सामान्य अनुमान गर्न गा¥हो पर्दैन ।
धनकुटा नगरपालिकामा १० जना मेयरका प्रत्याशी चुनावी मैदानमा छन्, जसमध्ये मुख्यतः चारवटा दलबीच चुनावी भिडन्त हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी (केन्द्र) तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यी सबै दलले आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा जनलहर उर्लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । विगतको स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा पनि यी चार दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण उम्मेदवारको पार्टीगतभन्दा व्यक्तिगत आकर्षण पनि मतदानको आधार बन्छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार दिनेश राई निकै उत्साही युवा हुन् । पार्टीको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका राई आफूसँग युवा जोसजाँगर भएकै कारण विकासको गतिविधि अघि बढाउन सक्ने दाबी गर्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सडक, खानेपानी, पर्यटन विकास आदि उनका चुनावी मुद्दा हुन् । यसैगरी एमालेका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी पाएका चिन्तन तामाङ भद्र नेताका रूपमा स्थापित छन् । वि.सं. २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा १ नम्बर वडाको वडाध्यक्षको अनुभव सँगालिसकेका तामाङ नगरको विकासका लागि आफूस“ग दरिलो रोडम्याप भएको दाबी गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रले पनि यो जिल्लामा दरिलो हैसियत जमाएको छ । उक्त पार्टीका तर्फबाट गणेश विष्ट मेयर पदका उम्मेदवार हुन् । वि.सं. २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको अनुभव सँगालिसकेका विष्ट मिलनसार स्वभावका कारण लोकप्रिय छन् । यसैगरी अर्का प्रत्याशी राप्रपाका नेता बालानन्द भुर्तेल पनि दरिलो आत्मविश्वासका साथ चुनावी मैदानमा छन् । विगतमा शाही शासनकालमा जिल्ला विकास समिति सभापति एवं धनकुटा नगरपालिकाको मेयरको अख्तियारी पाइसकेका भुर्तेल आफू नगरको विकासका लागि योग्य उम्मेदवार भएको दावी गर्छन् ।
३६ हजार ६ सय १९
१ सय ११ वर्गकिलोमिटर
१८ हजार १ सय २९